Shiinaha Dahabiga Dahaarka Knelson Centrifugal Isku-xiraha Warshadda iyo alaableyda | Kordhi
Dahabka Dahabka Dahabka Knelson Qaybta Kala-Soocidda Dahabiga ah
Iskuxiraha Qaybta Dahabka ee Qaybta Dahabka ah ee otomaatigga ah waxaa sidoo kale loogu yeeraa iskuxirka dhexe ee dahabiga ah ee Knelson. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo walxaha dahabka bilaashka ah ee ka soo baxa ciidda dahabka ah ee dahabiga ah ama dib-u-soo-celinta dhulka dahabka ah ee milkiilaha wax lagu shiido, sida milkiilaha kubbadda ama dhalada qoyan.
Xarunta Dhexe ee Dahabiga ah waxay la shaqeysaa isla mabda 'Falcon ama Knelson Gold Concentrator, laakiin kalabar ama 1 ka mid ah 10 ka mid ah qiimahooda. Dhexdhexaadiyaha Dahabiga ah ee Dahabiga ah waxaa loo isticmaali karaa oo keliya soosaarida dahabka, laakiin sidoo kale macdanta adag ee adag si looga soo celiyo dahabka dabiiciga ah, iyadoo la beddelayo isku-darka iyo in laga soo ceshado dahabka dabada.
Isku-uruurinta dahabka Centrifugal waa nooc cusub oo ah qalabka fiirsashada culeyska. Mashiinadu waxay adeegsadaan mabaadi'da centrifuge si kor loogu qaado culeyska culeyska ee ay soo mareen walxaha quudinta si ay saameyn ugu yeeshaan kala soocid ku saleysan cufnaanta walxaha. Qaybaha muhiimka ah ee cutubku waa baaquli qaabeysan oo "ururin" ah, oo xawaare aad u sarreeya ku shaqeynaya matoor koronto iyo a Jaakad biyo ah oo la cadaadiyey oo habeysan weelka. Waxyaalaha cuntada la cuno, oo sida caadiga ah ka yimaada dheecaanka wax lagu shubo ama duufaanta daadata ee qulqulka leh, ayaa loo quudiyaa iyada oo loo marinayo badhtamaha baaquli korka. , ayaa loo riixaa dibadda. Cirifka kore ee guriga baaquli uruurinta taxane feeraha ah oo u dhexeeya labada feeraha midkoodna waa jeexdin.
Hawlgalka, maaddada waxaa loo quudiyaa sidii macdanta macdanta iyo biyaha weel wareeg ah oo ay ku jiraan jeexjeexyo gaar ah oo dheecaan leh ama riffles si loo soo qabto culeyska. Biyaha dareera / dib-u-maydh biyo / dib-u-noqoshada biyaha ayaa lagu soo dhex mariyaa godadka dheecaanka badan ee koonto gudaha ah si sariirta loogu ilaaliyo macdano culus. Biyaha lagu nadiifiyey / dhabarka dhaqo / dib u noqoshada biyaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara inta lagu jiro kala maqnaanshaha.
Tirada biyaha gadaal u dhaca
(kg / daqiiqo)
(kg / waqti)
Biyo cadaadis ayaa loo baahan yahay
1) Heerka soo-kabashada sare: Baaritaankeenna, heerka soo-kabashada ee dahabka xajiyaha wuxuu noqon karaa 80% ama in ka badan, marka loo eego dahabka dhagaxa weyn, heerka soo-kabashada wuxuu gaari karaa 70% marka cabirka quudinta uu ka hooseeyo 0.074mm.
2) Si fudud loo rakibo: Kaliya meel yar oo siman ayaa loo baahan yahay. Waa mashiin leyn buuxa, kahor intaadan bilaabin, waxaan kaliya ubaahanahay inaan ku xirno bamka biyaha iyo korontada.
3) Si fudud loola qabsado: Waxaa jira kaliya 2 arrimood oo saameyn ku yeelan doona natiijada soo kabashada, waa cadaadiska biyaha iyo cabirka quudinta. Adoo siiya cadaadis biyo oo sax ah iyo cabirka quudinta, waxaad heli kartaa saameynta ugu wanaagsan ee soo kabashada.
4) Wasakh la’aan: Mashiinkaan wuxuu kaliya qaataa biyaha iyo awooda korontada, iyo dabo-baxa iyo biyaha. Sawaxan hoose, ma jiro wakiil kiimiko ah oo ku lug leh.
5) Si fudud loo hawlgalo: Marka la dhammeeyo cadaadiska biyaha iyo cabbirka quudinta la hagaajiyo, macaamiisha waxay u baahan yihiin oo keliya inay ka soo kabtaan waxyaabaha urursan 2-4 saacadood kasta. (Waxay kuxirantahay darajada miinada)
Hore: Mashiinka Naaftada Mashiinka La Qaadan Karo ee Dhagaxa Xashiishadda
Xiga: Gold Ore shiidi Mashiinka Mashiinka qoyan
Gold Ore Ball Mill shiidi muquuninta muquuninta M ...
Dahabka Kacha Centrifugal Uruuriyaha M ...
Mashiinka Kala Saarista Miisaanka Dahabka Dahabka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Macdanta
Ball Ball Mill Gold Mercury Amalgamator Foosto
Foornada Dareemeysa Dahabka Korantada